Androany Adobe Photoshop feno 30 taona: mankalaza azy amin'ny vaovao | Famoronana an-tserasera
Adobe Photoshop mankalaza ny faha-30 taonany! Mankalazà amin'ny vaovao ao amin'ny biraonao sy ny iPad
Andro lehibe ho an'ny Adobe rehefa feno 30 taona ny Photoshop amina endrika tena tsara sy misy fiasa vaovao samihafa ho an'ny birao sy iPad. Fandaharana iray izay nanjary zava-drehetra ho an'ny famolavolana sy ny famoronana ao anatin'ireo telopolo taona nisian'ny fiainana.
Photoshop izay amin'ny endriny voalohany natao hamoronana ny vokany hita maso ho an'ny Abyss, Sarimihetsika nataon'i James Cameron, na ny fomba namoronany ilay borosy fanasitranana tao amin'ny CS2, hatrany amin'ny majika nomena ny Fenitra mifototra amin'ny atiny. 30 taona ny fanavaozana izay nanamarika ny taloha sy aorian'ny ho an'ny mpamorona, ny mpampiasa ary ny indostria rehetra izay iarahan'ny famoronana sy ny endrika nozaraina.
Ary raha tamin'ny taon-dasa Photoshop dia nomem-boninahitra tamin'ny Academy Award, jereo manantena ny taona ho avy ary ireo izay handeha hamaky ny vaovao natolony androany.
Ao amin'ny Photoshop eo amin'ny birao no misy fanatsarana ny sehatrasa padding atiny atiny. Izany hoe ho afaka hanao safidy maro ianao ary hampihatra famenoana maro nefa tsy hiala amin'ny sehatr'asa amin'ny fotoana rehetra.
Ny iray amin'ireo fisongadinana manasa antsika hahalala an'i Adobe dia ny fanatsarana ny fahamaizan'ny lens amin'ny fampitomboana ny kalitaon'ny fivoahana sy ny fahombiazan'ny endri-javatra io rehefa vitan'ny GPU. Izay manatsara ny maranitra sy ny sisiny rehefa mampiasa an'io fiasa io
Photoshop amin'ny iPad dia mahazo vaovao tsara miaraka amin'ilay fitaovana fisafidianana zavatra, ary hamela fifandraisana lehibe satria ny mpampiasa no mampiasa ny rantsan-tànany amin'ity fitaovana Apple mahafinaritra ity. Misy ihany koa ny toerana vaovao momba ny typografika ary ao anatin'izany ny fanarahana, ny lalana, ny fanitsiana ary ny fandrafetana zavatra toa ny sora-baventy na sora-baventy.
Un andro tsara ho an'i Adobe sy ny faha-30 taonan'ilay programa quintessential ho an'ny famolavolana sy ny famoronana: Photoshop Ary tazomy toy izany mandritra ny 30 taona hafa!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Adobe Photoshop mankalaza ny faha-30 taonany! Mankalazà amin'ny vaovao ao amin'ny biraonao sy ny iPad
Pequenature dia hoy izy:
Ny zavatra tena ilaina dia ny fihenan'ny vidiny.
Valiny amin'ny Pequenature
Ny maody maizina dia tonga amin'ny WhatsApp amin'ny endriny farany amin'ny Android sy iOS